ကလေးငယ်တွေရဲ့ ရိုင်းပြသောအမူအကျင့်တွေကို ကိုင်တွယ်နိုင်ဖို့ ရိုးရှင်းသော နည်းလမ်း (၄) ခု
Home Lotaya ကလေးငယ်တွေရဲ့ ရိုင်းပြသောအမူအကျင့်တွေကို ကိုင်တွယ်နိုင်ဖို့ ရိုးရှင်းသော နည်းလမ်း (၄) ခု
ဒီကနေ့မှာတော့ ကလေးငယ်လေးတွေကို ရိုင်းပြသောအမူအကျင့်တွေကို နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတစ်ချို့ကို မျှဝေချင်ပါတယ်။
၁။ သင်ကြားရေးကို အခိုက်အတန့်သာ အသုံးပြုပါ၊ လမ်းညွှန်ခြင်းကို ပိုကြိုးစားပါ
ကျွန်မတို့ရဲ့ ကလေးတွေက မသင့်လျော်တဲ့အပြုအမူတွေကို ပြုမူနေတယ်ဆိုရင် သင့်လျော်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ ပြုမူဖို့ လမ်းညွှန်ပြနိုင်ပါတယ်။ သင်ကြားမှုဆိုတာကတော့ အခြေအနေနှင့် အချိန်အခါအလိုက်ပြုလုပ်ပေးရပါတယ်။ အကယ်၍ မေမေတို့ရဲ့ ကလေးက စျေးဝယ်စင်တာမှာ သင့်ကို ထားပြီး ထွက်သွားတဲ့အခါ အဖြစ်အပျက်တွေကို ပြောဆိုဖို့ အိမ်ရောက်သည်အထိ စောင့်ပါ။ သူတို့မှာ ဘာကြောင့် ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကို အပြစ်ပေးမယ့်အစား လမ်းပြလမ်းညွန်လုပ်ပေးပါ။
၂။ တုံ့ပြန်မှုကို အားပေးတဲ့မေးခွန်းမျိုးတွေကို မေးပါ
ကျွန်မတို့ကလေးတွေကို ဘာတွေလုပ်ရမယ်၊ ဘာတွေမှားယွင်းနေတယ်ဆိုတာ ပြောပြဖို့ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ သို့ပေမယ့် တစ်ခါတရံမှာ ၎င်းတို့ကို စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတွေကို လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်မယ့် မေးခွန်းမျိုးတွေကို ပိုမေးပါ။ ”အထုပ်အပိုးတွေကို မေမေ့ကိုပါ ကူထုတ်ပေးခစေချင်တာလား? သားကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်လား? မေမေတို့ ဘယ်အချိန်ထွက်ရင် ကောင်းမလဲ( နေ့လည်မှလား (သို့) ခုမနက်လား)?
၃။ သင့်ရဲ့ ကလေးနဲ့ ပြဿနာတွေကို အတူတူဖြေရှင်းပါ
ပြဿနာတွေကို အမြဲတမ်းကိုယ်တိုင်ဝင်ဖြေရှင်းပေးခြင်းထက် ကလေးနဲ့အတူတူ ဖြေရှင်းပါ။ ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ ၊ သူတို့ဘယ်လိုမတူတာတွေလုပ်နိုင်သေးလဲဆိုတာ မေးပါ။ သူတို့ကို လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်ပေးပါ။ အကြံဉာဏ်ပေးပါ။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ မေမေတို့အနေနဲ့ ကလေးငယ်ဘာတွေဖြစ်ချင်နေတယ်ဆိုတာ ပြန်လည်စဉ်းစားကြည့်ပါ။
၄။ ကလေးခံစားနေရတဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေကို အသိအမှတ်ပြုပါ
စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို ကျော်လွှားနေတဲ့အချိန်မှာ မေမေတို့ရဲ့ ကလေးလေးခံစားချက်က အပျက်သဘောဆောင်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ကြီးမားတဲ့ ခံစားချက်တွေကို ကိုင်တွယ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုအချိန်မှာ မေမေတို့က အသိအမှတ်ပြုပေးပါ။ သားစိတ်ဆိုးနေတယ်ဆိုတာ မေမေသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခြားနည်းလမ်းနဲ့ ကြိုးစားကြည့်နိုင်ပါသေးတယ်။ ”သမီးပင်ပန်းနေတယ်ဆိုတာ မေမေသိပါတယ်၊ မေမေလည်း ပင်ပန်းနေတာပဲ၊ ဒါပေမယ့် ဒါလေးကို ပြီးအောင် လုပ်ကြရအောင်?
Previous articleမေမေတို့ကလေးအား အိမ်စာချောချောမွေ့မွေ့လုပ်အောင် ကူညီဖို့ အကြံပြုချက် (၉)ချက်
Next articleဘေဘီလေးတွေက ဘာကြောင့်နို့အန်ကြတာလဲ/ ဘယ်လိုလျှော့ချမလဲ